BOUVIER DES FLANDRES DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Bouvier des Flandres Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Bajor madow Bouvier des Flandres, sawir qadarin leh Bajoron Kennels
Liiska Bouvier des Flandres Isku Darka Eeyaha
Flanders Eyga Eyga
Flemish Cow Ey
BOOV-yay maalin FLAHN-druh
Bouvier waa eey weyn, xoog badan, oo muuqaal adag leh. Madaxa waa in loo dhigmaa jirka, iyadoo eyga siineysa muuqaal laba jibbaaran. Dhabarka ballaaran, xoogaa gaaban wuxuu leeyahay jadwal adag oo heer sare ah. Madaxa waa fidsan yahay, wax yar buu ka dheer yahay ballacdiisa. Qalfoofku wuxuu barbar socdaa muuska, kaas oo ballaadhan oo dhegaha u dhexeeya. Xuubka ayaa xoogaa la duubay, ballaadhan yahay oo xoog badan yahay. Sanku waa madowyahay. Sunnayaasha Baashaalka waxay ka dhigayaan joogsiga mid ka sii cad sida uu dhab ahaan yahay. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Indhaha mugdiga ah ee mugdiga ahi waa qaab muuqaal ah oo wareegsan oo leh indho madow. Dhegaha saddex geesoodka ah ayaa sarreeya, ama la gooyey ama laga tegey dabiici ahaan. Lugaha dhabarka ee muruqsan ayaa xoog badan lugaha horena waa toosan yihiin. Dabada ayaa sare loo dhigay oo badanaa waa la xidhaa. Xusuusin: waa sharci daro in la beero ama laxirto qeybaha jirka eeyga (dabada iyo dhagaha) inta badan Yurub. Waxaa inta badan laga saaraa soo deynta (Dewclaws). Koodhka laba-geesoodka ah waa mid u adkaysta cimilada oo leh timo adag oo adag Koodhka hoose waa mid fiican oo jilicsan laakiin cufan. Koodhka waa la gooyey sidaa darteed wuxuu leeyahay shag, gadhka qaro weyn iyo sunnayaasha, oo eyga siinaya muuqaal u gaar ah. Midabada koofiyaddu waxay ku yimaadaan madow, fawn, timo cad, cusbo iyo basbaas, cawl ama guduud. Mararka qaar xabadka ayey ku leedahay xiddig yar oo caddaan ah. Koodhadhka adag ee madow laguma jecla giraanta bandhiga, laakiin waa la aqbalaa, jaakadaha timo cadna lama aqbalo. Khadadka dhiigga ee Dutch-ka badanaa way ka ballaaran yihiin kana culus yihiin khadadka Beljamka.
Bouvier des Flandres waa eey adeecsan oo umuuqda mid cabsi gelin kara, laakiin runti waa dabeecad wanaagsan oo jilicsan. Iyadoo qadarka saxda ah ee jimicsi sidoo kale way daganaan doontaa Xamaasad, xilkasnimo, xitaa xanaaq iyo cabsi la'aan, waa ilaalin heer sare ah iyo ilaaliye si fudud loo tababaro. Noocani wuxuu bartaa amarrada si dhakhso leh, inkasta oo aanu ahayn sida ugu dhakhsaha badan, tusaale ahaan Adhijirka Jarmalka . Waxay u baahan yihiin tababar isku dheelitiran oo weli ku habboon dabeecadda. Mar alla markay bartaan amar waxay xusuusan doonaan inta noloshooda ka hadhay. Waxaa muhiim ah in si joogta ah loo waaniyo eeyga, adigoon qallafsan ama qallafsan, inaad tahay iyo aad rabto sii madax . Noocani wuxuu u baahan yahay milkiile khibrad leh si looga hortago xukun iyo ilaalinta badan dhibaatooyinka. Waa inuu noqdaa bulsho sifiican, sida la doorbido laga bilaabo da'da hore si looga fogaado xishoodka, shakiga, iyo boos celinta shisheeyaha. Badbaadinta qoyska marka qatar jirto ma aha wax u baahan in la baro, mana ahan wax aad ku tababaran karto iyaga. Eyga ayaa ku soo bixi doona munaasabadda haddii loo baahdo. Eyga wanaagsan ee qoyska, Bouvier ayaa jecel oo aad ugu fiican carruurta. Bouvier waa mid aad loo waafajin karo wuxuuna ku socdaa meheraddiisa si deggan oo deggan. Daacadnimada eeygan ayaa caan ku ah adduunka. Tabobar adeecid noocani markuu yaryahay. Dabeecadooda guud ahaan iyo xayawaanada kale waxay kuxirantahay awooda milkiileyaasha inay ku noqdaan alfa eyga, u gudbiyaan waxa laga filayo iyo heerka shaqsiyadeed ee eyga. Haddii ay si sax ah u yihiin bulsho da'da hore, fursadaha ayaa ah inay si wanaagsan ula qabsan doonaan bisadaha iyo xayawaanka kale , laakiin taxaddar la yeelo xayawaanka aan xayawaanka ahayn . Badanaa way ku fiican yihiin eeyaha kale haddii laga soo koriyo eeyaha. Shakhsiyaad badan oo awood leh ayaa noqon kara eey-dagaal haddii milkiilayaashu aysan alfa ahayn oo aysan sameynin la xiriir eyga in dagaalka aan la rabin. Si gaabis ah ugu bislaada maskaxda iyo jidhka labadaba, qaadashada qiyaastii 2-3 sano.
Dhererka: Ragga 23 - 28 inji (58 - 71 cm) Dumarka 22 - 27 inji (56 - 69 cm)
Miisaanka: Ragga 75 - 110 rodol (34 - 50 kg) Dumarka 60 - 80 rodol (27 - 36 kg)
U nuglaanshaha dysplasia hip, dhibaatooyinka indhaha sida cataracts. Bouvier wuxuu leeyahay marin aad u xanuun badan. Waxay xiriir badan la yeelan karaan lugaha lo'da iyaga oo aan dareemin. Tani kama dhigeyso iyaga bukaanka xoolaha ee uu jecelyahay, maadaama aysan sheegi karin halka eygu wax yeeleynayo isagoo lugta iyo / ama qaybaha kale ee jirka wax ka qabanaya. Waxay u egtahay inay gaaska gudbiso.
Bouvier des Flandres okay kuma fiicnaan doono guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Guriga dhexdiisa wax hawl ah kama ahan oo sida ugu fiican ayey ku shaqeyn doontaa ugu yaraan daarad weyn.
Bouvier des Flandres waa eey firfircoon oo firfircoon oo leh celcelis ahaan dalab jimicsi. Waxay ubaahantahay inay kula baxdo adiga socod dheer oo maalin walba kacsan ama ku ordaya baaskiil. Markaad socotid eeygan, ka dhig ciribta hogaanka. Ha u oggolaan inuu ka baxo hore sida dareenku u sheego hoggaamiyaha xirmada eeyga ayaa ugu horreeya. Inta lagu jiro marxaladda sii kordheysa, jimicsiga waa in si taxaddar leh loo nidaamiyaa oo kaliya socodka, sidaa darteed lafaha, muruqyada iyo kala-goysyada sii kordhaya si adag looma adkeynin. Eeygu wuxuu u baahan yahay dhammaan xooggiisa si uu u dhiso jir xoog leh, caafimaad leh.
5 - 10 eyyo, isku celcelis 8
Wuxuu ubaahanyahay qurxin badan. Si joogto ah u caday jaakadda dheer oo ku maydh ama ku qallaji shaambo keliya markii loo baahdo. Bouvier wuxuu u baahan yahay in la jarjaro ugu yaraan saddex jeer sanadkii. Inta udhaxeysa timaha ka saar wixii timo dheeri ah oo ku jira gudaha dhegaha iyo jar timaha u dhexeeya suufka cagaha. Ha u oggolaan in timuhu aad u dheeraadaan oo u dhow yihiin cagaha si ay u hagaajiyaan si Bouvier uu u yeesho cagaha wanaagsan. Bouvier si fiican loo xardhay ayaa timo aad u yar ku daadinaya guriga. Qaar ka mid ah milkiilayaasha Bouvier ayaa soo sheegay Bouvier inuu u fiicnaado dadka xasaasiyadda qaba.
Ma jiro heshiis dhab ah oo ku saabsan asalka noocyadan Franco-Belgian. Waxaa laga yaabaa inay ku samaysantay ka gudubka Griffon iyo Beauceron . Noocani wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Belguim fasalka shaqeeya ee aan daneyneynin inay abuuraan eey show ah, laakiin waxay doonayeen ey ee shaqeeya. Beeraleyda, kawaanleyda iyo ganacsatada lo'da waxay u adeegsan jireen eeyaha howl maalmeedkooda. In kasta oo eeyadu ay ku kala duwanaayeen cabirkooda iyo muuqaal ahaanba, haddana waxay la mid ahaayeen kuwo ku filan oo lagu aqoonsan karo inay yihiin Bouvier. Bouvier des Flandres waxaa loola jeedaa 'lo' ka timid Flanders. ' Eeyaha ayaa lagu calaamadiyey naaneysyo dhowr ah sidoo kale, sida 'koehond' (oo macnaheedu yahay eeyga lo'da), 'Vuilbaard' (oo macnaheedu yahay gadhka wasakhaysan) iyo 'toucheur de boeuf' ama 'pic' (oo macnaheedu yahay darawal lo '). Markii dambe waxaa loo adeegsaday inay ahaadaan farriin side iyo eey samatabbixin ah intii lagu jiray Dagaalkii Koowaad ee Adduunka Sida noocyada badankood intii lagu jiray dagaalladii adduunka, Bouvier wuxuu ku sigtay in la dilo. Sanadkii 1923 koox shaqsiyaad ah ayaa ka shaqeeyay dib u soo nooleynta Bouvier breed iyo koox caan ah ayaa laga sameeyay Belgium. Qaar ka mid ah hibooyinka Bouvier waa ilaaliyaha, ilaaliyaha, eeyga raadraaca, hagaha indhoolayaasha, raadinta iyo samatabbixinta, shaqada bilayska, shaqada millatariga, gaadhiga, deg degnimada, u hoggaansanka tartanka iyo Schutzhund.
Naafee Bouvier-ka timo cad - 'Waxaan ka qaaday sawirkan wiilkeyga 4-1 / 2-sano jir ah, BdF lab ah. Magaciisu waa Diesel waana wiilka ugu macaan abid-bahal dhab ah. Isagu waa eey aad dib u dhigtay laakiin kama labalabeeyo inuu na ilaaliyo haddii uu dareemo hanjabaad. Wuxuu jecel yahay ‘walaashiis,’ dheddig Terrier-ka Australia iyo dhadig Poodle Guntin (waa kuma hogaamiyaha taasna way ku fiican tahay Diesel). MA jecla bisadaha. Waxyaabaha uu jecel yahay Diesel inuu sameeyo ayaa ah inuu ku dabaalanayo badda dhexdeeda, kuna ordayo xeebta, isla markaana uu ku ciyaarayo ‘cayrsiga’ barxadeena (anigu waxaan ahay chaser he is the chasee). Waxa kale oo uu jecel yahay inuu sariirta nala seexdo oo uu isku dayo inuu la qabsado qol yar sida ugu macquulsan. Aniga socod Diesel maalin kasta ugu yaraan saacad-ka sii dheer maalmaha fasaxa ah markii uu ku raaxeysto socod dheer oo 2 saacadood ah oo buuro ah. Wuxuu si gaar ah iigu xidhan yahay aniga (hooyo) laakiin wuu jecel yahay qof walba, oo ay ku jiraan carruurta. Wuxuu u baahan yahay a shanlo wanaagsan - ugu yaraan maalin kasta oo kale. Waxa kaliya ee xun ee isaga ku saabsan waa asaga gaaska . Haa, waa wiil aad u gaas badan (sidaa awgeed magiciisa) qolkana wuu nadiifin karaa waqti yar. Waxaan u maleynayaa dadku inay ka feejignaadaan tan kahor intaadan iibsan BdF maaddaama ay tani tahay wax caan ku ah noocyadan. Xaqiiqdii waa inaad jeceshahay eeygaaga si aad ugu adkeysato urta!
Molly the Bouvier des Flandres eey ayaa jirta 17 toddobaad
'Willow eeyaha Bouvier ee 14 toddobaad jira ayaa durbaba ku jira tababarka si uu u noqdo eey dabiici ah. Oh, oo iyadu waa eyda ugu quruxda badan adduunka. Iska hubi!
'Waxaan ahay Bouvier des Flandres eey ah oo la yiraahdo Windmolen's Indigo Blue, laakiin dadku waxay iigu yeeraan Buluug.' Lahaanshaha sawirka Windmolen Bouviers
'Dixie waa biin lacag ah Bouvier des Flandres oo dhererkeedu yahay 30 inji iyo geel ah 125 rodol oo jira 9 sano. Weligay ma arkin mana yeelanin sidaan oo kale xasilloon, xitaa xanaaqsan. Way ku fiican tahay carruurta, eeyaha kale iyo xayawaanka beeraha si kastaba ha noqotee, bisadaha iyo jiirka ay u eryanayaan ujeedooyin cunto karin oo keliya! Waxay aad u ilaalisaa guriga iyo hantida, hase yeeshee waa eey lagu kalsoonaan karo markay bulshada dhexdeeda ku jirto ganacsiga qoyska. Wax yar ayey daadisaa, laakiin jaakaddu waxay u baahan tahay taxaddar badan maadaama ay si joogto ah u foorarsato oo sida Velcro ay wax walba u soo qaadato! Iyadu waa qof caqli badan, ugaarsi badan oo xoog leh, xoog badan oo madax adag taas oo dhammaantood ka dhigaysa Bouviers eey aad ugu habboon xirfadle khibrad leh. Kani waa eeyga aan dan ka lahayn waxa ay xidhato iyo halka ay aadeyso intay dhinacayga tahay. Waxay ku nooshahay nolosheeda si buuxda oo raaxo leh waxayna ka dhigaysaa walaasheeda ka yar ee King Shepherd inay u ekaato Marwada wanaagsan ee Manor!
Nani bloou Bouvier blonde Bouviers waxay ku dhashaan mugdi waxayna ka iftiimaan xagga hoose ilaa markay sii weynaadaan.
Paden the Bouvier, oo ay leeyihiin George iyo Frances Roach, The Bytown Obedience Club
Eeg tusaalooyin badan oo ah Bouvier des Flandres
muqisho Akita isku darka adhijir Jarmal for sale
Ey yaryar oo cas san ah oo loo yaqaan 'puppy puppy puppy'
bulldog american iyo boston terrier mix
cairn terrier yar yar iskudhafka schnauzer